राजा वीरेन्द्र किन मारिए ? - Sudur Khabar
राजा वीरेन्द्र किन मारिए ?
Sudur Khabar January 12, 2018 पत्रपत्रिका 0
Total Reader : 23
काठमाडौं, पुस २८ । राजा वीरेन्द्रको सम्झनाले धेरै नेपालीको हृदय द्रबित हुन्छ । मुटु झङ्कृत भएझैँ लाग्छ र नयन रसाउन थाल्छन् । नेपाल र नेपालीलाई शान्त, समृद्ध, सुखी र खुसी राख्न चाहने राजा वीरेन्द्रको जन्मदिन पुस १४ गते ।
त्यसैले, उनीप्रति श्रद्धा राख्ने सबैले यो दिनलाई महत्वपूर्ण मान्ने गर्छन् । र, बारम्बार प्रश्न गर्छन्, किन मारिए राजा वीरेन्द्र ? कसले माृयो उनलाई ? अाजकाे नागरिक दैनिकमा युवराज गौतम लेखेका छन् ।
ब्रिटेनमा केही वर्ष पढेपछि २०२४ सालमा उनी टोकियो विश्वविद्यालयमा भर्ना भए । त्यसपछि उनी हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा पढ्न थाले । डिन प्राइस, हेनरी किसिन्जर, कार्ल डचेच, ई। राइसआवर, जोन केनेथ ग्राल्ब्रेथ लगायतका प्राध्यापकबाट प्राप्त ज्ञानले उनको जीवनमा ठूलो प्रभाव पारेको देखिन्छ । हार्वर्डको अध्ययनपछि वीरेन्द्रले एसिया, ल्याटिन अमेरिका, युरोप, क्यानडा र अफ्रिकी राष्ट्रहरूको भ्रमण गरेर त्यहाँँका राष्ट्राध्यक्ष, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, विद्वान्, विदूषी आदिसँग भेट गरे । त्यो पनि अध्ययनकै एउटा पाटो थियो ।
२०२८ साल माघ १७ गते राजा महेन्द्रको असामयिक स्वर्गाराहेण भएपछि युवराज वीरेन्द्र नेपालका राजा भए । राष्ट्रियता, विकास र प्रजातन्त्रलाई मुख्य आधार बनाएर उनले शासनको बागडोर सम्हाले । राष्ट्रिय स्वतन्त्रता सदैव अक्षुण्ण रहोस् भन्ने अभिप्रायले उनले देशवासीलाई लगातार घच्घच्याइरहे ।
२०३१ फागुन १२ गते श्री ५ वीरेन्द्रको शुभराज्याभिषेक वैदिक विधि तथा राजपरम्परा अनुसार विशेष सार्वजनिक समारोहबीच वसन्तपुर दरबारको प्रांगणमा अवस्थित नासल चोकमा सुसम्पन्न भयो । विश्वका एक मात्र हिन्दुराजाको शुभराज्याभिषेकमा सहभागी हुन साठी राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख र प्रतिनिधिहरू नेपाल अएका थिए ।
राजा महेन्द्रले ५३ राष्ट्रसँग कूटनीति सम्वन्ध स्थापना गरिसकेकाले धेरैजसो राष्ट्र नेपालबारे अनभिज्ञ थिएनन् । विश्वमञ्चमा नेपालको भूमिका महत्वपूर्ण हुँदै गएको र नेपालले हजारौँ वर्षदेखि बचाएको स्वतन्त्रता, एकता र अखण्डता अन्य देशका लागि समेत उदाहरणीय बनेको सन्दर्भमा त्यसबेला संसारले नेपाललाई सुक्ष्म रूपमा हेरिरहेको थियो ।
श्री ५ वीरेन्द्रको शुभराज्याभिषेक समारोहमा अमेरिका, ब्रिटेन, अस्टे«लिया, चीन, भारत, इजरायल, इटाली, अस्ट्रिया, अल्जेरिया, उत्तर र दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन्डोनेसिया, कुवेत, क्यानडा, चिली, इराक, जर्मनी ९पूर्व र पश्चिम०, जापान, जोर्डन, टर्की, डेनमार्क, नर्वे, पोल्यान्ड, सोभियत संघ, इरान र न्युजिल्यान्डका प्रतिनिधि उपस्थित भए ।
यस्तै, फ्रान्स, बंगलादेश, बर्मा, बुल्गेरिया, भुटान, मंगोलिया, मलेसिया, इजिप्ट, मोरक्को, युगोस्लाभिया, ग्रीस, रोमानिया, लाओस् र लेवनानका प्रतिनिधि आएका थिए । यस्तै, श्रीलंका, सिंगापुर, स्पेन, थाइल्यान्ड, स्वीडेन, स्वीट्जरल्यान्ड, हंगेरी र संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि पनि समारोहमा सामेल भएका थिए ।
इतिहास साक्षी छ, ठूल्ठूला घटना–दुर्घटनाबाट पाठ सिकेर धेरै राष्ट्रले अस्तित्वको रक्षा गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वाभिमान बचाएका छन् । राष्ट्रिय एकताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रहितको संवद्र्धन–सम्पोषण गरेका छन् । स्पेन, फ्रान्स र अस्ट्रियाले पटकपटक थिचोमिचो गरेपछि राष्ट्रलाई शक्तिशाली, निःस्वार्थी र विवेकशील नेतृत्व चाहिन्छ भन्ने इटालीका जनतामा चेतना आयो । मेजिनीकै समयमा राजा चाल्र्स अल्बर्टले इटालीलाई स्वाधीन तुल्याउन अस्ट्रियासँग युद्ध गरेका थिए ।
कस्टोजाको युद्धमा इटाली परास्त भयो । गणतन्त्रवादी नेता मेजिनीले राजालाई सल्लाह दिए, “म सहज स्थितिमा राजातन्त्रको समर्थन नगर्ने मान्छे तर आज राष्ट्र गम्भीर संकटमा छ । त्यसैले म राष्ट्र बचाउन तपाईंलाई (राजालाई) जुनसुकै मद्दत गर्न तयार छु ।” नोभोराको युद्धमा पनि राष्ट्र परास्त भएपछि राजाले छोरा भिक्टर इमान्युअललाई गद्दी सुम्पे । उदार हृदयका भिक्टरले गणतन्त्रवादी नेता मेजिनीसँग मिलेर राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने योजना बनाए । राष्ट्रिय एकता र अखण्डता बचाउन मेलमिलापको नीति लिए । मेजिनीको सल्लाहमा प्रबल राष्ट्रवादी नेता क्याभरलाई राजाले प्रधानमन्त्री बनाए । उनले इटालीका जनतामा राष्ट्रवादको अपूर्व लहर ल्याए । क्याभरले भने ‘इतालिया फारा दा से’ ९इटाली आफ्नो रक्षा आफैँ गर्छ ।० विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध यो खुला चेतावनी र सन्देश थियो ।
तीस वर्षसम्म राजा वीरेन्द्रको सामीप्यमा रही निकट सम्बन्ध राख्न सफल डा। यादवप्रसाद पन्त ९पूर्व अर्थमन्त्री, कूटनीतिज्ञ र राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर० राजा वीरेन्द्रसँग अत्यन्त प्रभावित थिए । कालिकास्थान ९काठमाडौँस्थित निवासमा उनले पंक्तिकारसँग भनेका थिए, “कृषि र उद्योगमा प्रगति गर्न सकेनौँ भने नेपालको राष्ट्रिय आय माथि उठाउन सकिँदैन भन्ने राजा वीरेन्द्रको धारणा थियो ।” पन्तले “श्री ५ वीरेन्द्रको आर्थिक विकासको अवधारणा” शीर्षकको आलेखमा पनि यसको व्याख्या गरेका छन् ।
२०४३ सालमा प्रधानमन्त्री भएका मरीचमानसिंह श्रेष्ठ राजा वीरेन्द्रसँग खुलेर छलफल गर्थे भन्ने कुरा उनका अन्तर्वार्ता र उनीसँगको कुराकानीका प्रसंगमा छर्लंग भएका छन् । २०४५ सालमा सेनाले चीनबाट एन्टी एयरक्राफ्ट गन लगायतका सामग्री झिकाउँदा भारतले १५ महिनासम्म नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी ग¥यो । भारतका विदेशसचिव एस। के। सिंह ६ बुँदे प्रस्ताव लिएर आए । अब भारतसँग मात्र हतियार किन्नुपर्ने, भारतको स्वीकृतिबेगर कुनै राष्ट्रसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न नपाइने, व्यापार र पारवहनमा भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने आदि विषय त्यसमा उल्लेख थियो । राजा वीरेन्द्रले सो प्रस्तावबाट नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान खरानी हुन्छ भन्दै ठाडै अस्वीकार गरिदिए ।
त्यसपछि भारतले दिल्लीका नेता एवं पत्रकारहरूको हुल पठाएर “राजा वीरेन्द्रको एकाधिकार र निरंकुशता तोडेर दलहरूका हातमा शासन व्यवस्था ल्याउनुपर्छ” भन्दै २०४६ सालको आन्दोलन सुरु गरायो । चन्द्रशेखर, हरकिशनसिंह सुरजित, सुब्रमव्यम् स्वामी, एम।जे। अकबरलगायतका नेताले राजा वीरेन्द्र ‘तानाशाह’ हुन् भन्दा नेपालका कैयन् नेताले थप्पडी बजाए । बिपीका जेठा छोरा प्रकाश कोइरालादेखि पूर्वप्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यसमेत धेरै राष्ट्रवादीहरू २०४६ सालको आन्दोलनका पक्षमा थिएनन् ।
दिल्ली फर्किने बेलामा तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव एस। के। सिंहले राजा वीरेन्द्रले भारतको प्रस्ताव अस्वीकार गरेकाले उनले अत्यन्त ठूलो दुष्परिणाम भोग्नुपर्ने बताउँदै विमानस्थलमा उनी निकट केही व्यक्तिलाई ६ बुँदेको सट्टा त्यसको डबल १२ बुँदे प्रस्ताव ल्याएर एकदिन नेपालको राजतन्त्र ढाल्ने चेतावनी दिएको बताइन्छ । भनिन्छ, राजा वीरेन्द्रको हत्यापछि दिल्लीमा नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई १२ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गराएर भारतले नेपालमा राजतन्त्रसँग प्रतिशोध लिएको थियो ।
२०४५ सालमा राजा वीरेन्द्रले झन्डै बीसजना वामपन्थी राजबन्दीलाई राष्ट्रियतालाई सहयोग गर्ने सर्तमा कारावास मुक्त गरिदिएका थिए । तर उनीहरूमध्ये कैयन्ले महाकाली सन्धि लगायत कतिपय भारतीय स्वार्थको पक्ष लिएर आफ्नो सक्कली अनुहार देखाए । वामपन्थी नेताहरूमध्ये एक जनाले “भारतीय सेना बोलाएर राजा वीरेन्द्रलाई पाता कस्नुपर्छ” भनेर बैठकमा अभिव्यक्ति दिएपछि मदन भण्डारीले उनलाई बेस्सरी हप्काएको र त्यस्ता शब्द फिर्ता लिन चेतावनी समेत दिएको बताइन्छ । राधाकृष्ण मैनालीले आफ्नो पुुस्तकमा यो प्रसंग उठाएका छन् भने बैठकका कतिपय सहभागीहरूले त्यसबेला राजासँग सहकार्य गर्ने कि भारतसँग रु भन्ने निकै बहस चर्केको बताउँछन् ।
जग्गा प्लटिङ अनुमतिः छानबिन गर्दै अख्तियार
मधेसमा शीतलहरले सकस, सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर
किन गर्दैछन् नर्सहरुले आन्दोलन ?